Ukujonga isikhundla seSiza sakho ngokuKhangela okwenziwe ubuNtu | Martech Zone
NgoLwesithathu, uDisemba 16, 2009 NgoLwesihlanu, Februwari 10, 2017 Douglas Karr
Omnye wabathengi bam wabiza kule veki iphelileyo kwaye wabuza ukuba kutheni, xa ekhangela, indawo yakhe yayiqala ukubekwa kwinqanaba kodwa omnye umntu wayemhlise kancinci ephepheni. Ukuba awuyivanga i-ruckus, UGoogle uvule ukhangelo olwenzelwe wena iziphumo ngokusisigxina.
Oko kuthetha ukuba ngokusekwe kwimbali yakho yokukhangela, iziphumo zakho ziya kwahluka. Ukuba ujonga indawo ekuyo indawo yakho, uya kufumanisa ukuba zonke ziphuculwe kakhulu. Nangona kunjalo, kunokwenzeka ukuba baphucule wena kuphela kwaye akukho mntu wumbi. Ukujonga ngokwenyani inqanaba lakho, kuya kufuneka ucime iziphumo zophando olwenzelwe wena.
Zintathu iindlela zokucima ukukhangela okwenzelwe wena:
Ukuqinisekisa okwethutyana ukuba icinyiwe, phuma kuso nasiphi na isicelo sikaGoogle ongene kuso.
Susa nayiphi ikuki kuGoogle. Oku kuyakungena ngaphandle apho ukhangelo alwenziwanga ngokobuqu. Kwakhona, Ukukhangela ngasese kwi-Safari, Firefox okanye i-IE8 kufuneka ibe nefuthe elifanayo. KwiGoogle Chrome, inqaku libizwa Ukhangelo lwe-incognito.
Ukuyisusa ngokusisigxina imbali yakho, ngena kwi Imbali yokuKhangela kwiWebhu kaGoogle kwaye uyikhubaze. Yiya kwiAkhawunti yam kwaye ucofe u-Hlela ecaleni kweeMveliso zam kwaye ucofe Cima iMbali yeWebhu ngokusisigxina. Xa imbali yakho icinyiwe, akukho ndlela yokwenza iziphumo zakho zokhangelo zibe zezakho. Kuya kufuneka uyenze rhoqo le nto.
Ukuba ungathanda ukwenza kube lula kuwe, ndingacebisa ukuba utshintshele (ngokungaqhelekanga) Google Chrome. Ungavula i Incognito Window (ctrl-shift-N) kwaye ayizukufikelela kwimbali yakho yokukhangela okanye usete ii-cookies… uzokwazi ukuhlala ungene kuGoogle kwifestile enye kunye ne-incognito kwiwindow entsha. Nantso indlela endiyithathe ngayo umfanekiso wekhusi apha ngentla… buqu ngasekhohlo kwaye hayi ngokwezifiso kwiwindow ye-incognito.
Uncedo lweGoogle Chrome kukuba Ukukhangela ngasese Iimpawu zezinye iibrawuza zenza zonke iiwindows zabucala. Awunakho ezinye ezikhoyo kwaye ezinye azikho. I-Chrome yenze umsebenzi olungileyo ekwenzeni oku kungasebenzi.
Gcina ukhumbula ukuba oku akuboneleli ngokuchanekileyo ngokupheleleyo. Isixhobo sakho kunye nendawo okuyo ziya kuchaphazela iziphumo. Ukujonga okwenyani kwizinga lakho, unokujonga Ikhonsoli ye Khangela yeGoogle kwaye ndiyakucebisa kakhulu ukuba ubhalise Semrush.
tags: ukujonga inqanabaincognitoUhlobo lwegama elingundoqoUluhlu lwamagama aphambiliukhangelo olwenzelwe wenaudidiiphepha leinjini yokukhangelaIziphumo zenjini yeinjini yokukhangelainyokaUhlobo lwe-serp
Ngaba Uyindlovu okanye Ibhabhathane?
Ngomhla wama-17 ku-Disemba 2009 ngo-8: 48 AM
Doug, Siyavuyisana! Ungumntu wokuqala ukucebisa usetyenziso lokhangelo lwe-icognito ngaphandle kokubonakalayo 🙂
Ngomhla wama-17 ku-Disemba 2009 ngo-6: 36 PM
Ngaba i-incognito isebenza ngokulungileyo njengoko ipapashiwe?
(kwaye kutheni ndingasebenzisi i-ID yam ye-wordpress ukuphawula?)
Jan 7, 2010 ngo-12: 27 PM
Le yenye yeendlela ezilula zokwenza izithuba ezinamathele entlokweni yam. Ke, namhlanje xa bendifuna olu lwazi, bekuyindlela elula yokuzingela kwaye ndisebenzise ukufunda. Enkosi kuwe, ndikhuphele iChannel kwaye ndisebenzise amaphepha eIncognito ukuvavanya uphando oluthile. Enkosi!